Iimephu zasimahla zeTomTom- Ngaba uyazi ukuba uyihlaziya njani iTomTom yakho? | Iindaba zeGajethi
IiMephu zasimahla zeTomTom
UPablo Aparicio | | IGPS
Ufuna hlaziya iTomTom yakho? Namhlanje sineendlela ezininzi zokufika kwindawo esiya kuyo. Ngasemva kakhulu kwezo mephu zinkulu zamaphepha esasinokuzityhila, kodwa kwakunzima ukubabuza kwaye sizibuyisele kwigumbi lesiglavu. Ngoku sonke sinemephu eninzi epokothweni yethu, kwi-smartphone yethu. Ngayiphi na imeko, abo bahamba ngeGPS yedesktop banee-eriyali ezinkulu kwaye ziya kuhlala zichanekile ngakumbi kunashukumisi bethu kwaye abahamba ngeenqanawa abadumileyo bahlala beba-TomTom ngokwabo.
Los Iimephu zeTomTom sinike ulwazi oluninzi Kwaye ke ixesha elide. Ulwazi luphelelwa lixesha ngokukhawuleza njengoko izitrato zitshintsha, ke kwiinyanga nje ezintandathu, kuxhomekeke kwindawo esihlala kuyo, sinokuba neGPS esisikhokelele kwiindawo ezingasekhoyo. Into elungileyo yile hlaziya i-TomTom mahala olu lwazi yinkqubo ethe tye. Into embi kukuba kuya kufuneka sihlawule kakhulu ukugcina isixhobo sethu sihlaziywa. Ukuba, nangasiphi na isizathu, asinakuthwala iindleko, sinokuhlala sikhuphela iimephu ngezinye iindlela.
1 Khuphela iimephu zeTomTom Simahla
2 Faka iimephu zeTomTom
3 Yenza iimephu zeTomTom zisebenze ngefactactivate
4 Uyifaka njani iRadars kwiTomTom
4.1 955/956 Itshathi yokuhambelana kwemephu
4.2 Itafile yokuhambelana kwemephu engama-960
Khuphela iimephu zeTomTom Simahla
Eyona ndlela yokugcina i-TomTom yedesktop yethu ihleli ihleli ukuza kuthi ga ngoku Ndwendwela iqonga leForokeys.com. KwiForokeys sinalo lonke ulwazi oluyimfuneko ukuze i-TomTom yethu isinike ulwazi oluchanekileyo kwaye ingekho njengomhlobo wam, endaweni yokuba uTomTom yena abe sisidenge «isidenge». Kodwa kwiiForokeys azikho kuphela iimephu zeTomTom, kodwa zikwakhona nezinye izikhuthazo eziza kwenza umqhubi wethu Isixhobo sendlela.
Inkuthazo endibhekisa kuyo zezi amanqaku anomdla, eyaziwa ngokuba yi-POI (Inqaku loMdla) okanye i-POI. Phakathi kwamanqaku anomdla sikwanayo ii-radars ezizinzileyo, ezinye radars ekufuneka zipapashwe ngumthetho, kodwa kuhlala kungcono ukuba zibandakanywe kwi-GPS ye-navigator kunokuba kufuneka siqwalasele ulwazi lwe-DGT (iCandelo Jikelele lezoThutho) ngalo lonke ixesha sisiya kuthatha uhambo ngakwindawo oko asazi.
Ukuze sikwazi ukusebenzisa iimephu zeTomTom, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukujonga abo banomdla kuthi. Ukwenza oku, emva kokubhalisa, sinokwenza uphando kwiforum. Ukuba ufuna iimephu zaseSpain, yeyiphi into onomdla kuyo kukukhangela "Iberia" okanye "iYurophu". Nje ukuba imephu ikhutshelwe, kuya kufuneka isebenze, ekufuneka uyikhuphele yona i-activator iyafumaneka kwiforum.
I-TomTom ibonelela ngeemephu zobomi zasimahla kuluhlu lwayo lokuQala
Ukukhuphela imephu kwiiForoKeys kwahlukile kwindlela esiyenza ngayo kwiiwebhusayithi ezininzi zokukhuphela iifayile zolu hlobo (ezingekho semthethweni). Kwiforum siya kufumana isithuba kunye amakhonkco kwiimephu zeTomTom esizijongileyo, ezi linki ziya kusisa kwindawo yokukhuphela imephu kwenye yemimandla yokukhuphela ezona fayile zidumileyo (njengeMega, kodwa oku kubonakala kufumaneka kuphela kubasebenzisi beforum yeVIP). Nje ukuba sikhutshelwe kuya kufuneka sizifakele.
Faka iimephu zeTomTom
Faka imephu kwi-Tomtom GPS Idesktop ayinzima kwaphela (ubunzima buza kamva). Ukuyifaka, siya kwenza oku kulandelayo:
Siqhagamshela intambo ye-USB kwi-GPS nakwikhompyuter (yeWindows, ukuba inokuba njalo).
Sifumene ifayile ebesiyikhuphele kwaye sayivula (ukuba icinezelwe).
Kwi "PC yam" siza kubona iTomTom yethu njengedrayivu esuswayo. Siyavula.
Sinqakraza ekunene kwaye senze ifolda.
Siyiqamba ngokutsha ifolda enegama elifanayo nefayile ebesiyikhuphile. Kubaluleke kakhulu ukuba inegama elifanayo okanye ayizukusebenza. Ukuba sikhuphele i- "eastern_europe.zip", ifolda yethu kufuneka ibizwa ngokuba yi "eastern_europe" (ngaphandle kwezicatshulwa kuwo omabini la matyala).
Sikopa idatha kwifayile engafakwanga kwifolda entsha kwaye sele sele sizifakile, kodwa kusafuneka sizenze zisebenze.
Yenza iimephu zeTomTom zisebenze ngefactactivate
Kukho ezinye iindlela, kodwa ndicinga ukuba le yeyona ilula kwaye ikhawulezayo. Ungalanda i- "fantactivate" kwiForoKeys; injengesithuba esisigxina. Ukwenza iimephu zisebenze siza kwenza oku kulandelayo:
Siqhagamshela i-TomTom GPS yethu kwi-Windows PC yethu.
Kwi-PC yethu sifikelela kwi-drive ekhutshweyo yeTomtom yethu.
Sikopa ifayile FastActivate.exe kwingcambu yememori yangaphakathi ye-GPS. Ukuba sinekhadi, kubhetele kwikhadi le-SD.
Sinqakraza kwinani leemenyu esizifunayo. Umelwe kukucofa inombolo 4.
Uyifaka njani iRadars kwiTomTom
Sinokufaka ii-POIs (Amanqaku oMdla) kwidesktop yethu yeTomTom. Ukwazi ukuba iimephu zeTomTom zifakwe njani, faka iiradars ukuze basilumkise kwaye bangathathi foto kukudlala komntwana. Kufuneka nje sitsale iifayile esizikhuphelileyo, ezihlala zinamagama afana ne "radars_fijos.ov2" (kunye nezinye ezinezandiso ezahlukeneyo), kwifolda yemephu oyifunayo.
Kubalulekile ukukhankanya ukuba, ngokufanelekileyo, ukuba sikhuphela amanqaku anomdla okanye iiradars ezivela eSpain, kuya kufuneka sizikope kwifolda «Iberia» okanye imephu equlathe iSpain, enjengeyaseYurophu. Iidadars zaseSpain azizukusebenza kwimephu yaseAsia kwaye, xa silishiya ilizwe apho sifake khona iiradars, siza kuyeka ukufumana izilumkiso. Ngayiphi na imeko, nangona ndibone iidadars zaseSpain kwiimephu zaseYurophu, eyona ilula kakhulu sebenzisa amanqaku anomdla kuphela kwiimephu ezenzelwe zona. Kungcono ukuthintela kunokunyanga.
955/956 Itshathi yokuhambelana kwemephu
Itafile yokuhambelana kwemephu engama-960
Ukuba une-TomTom desktop navigator, awusenasizathu ukuze ihlale ikuxelela ukuba kufanele ukuba ibe njani, into ehlala ibalulekile kwaye ingakumbi ukuba sisendleleni. Kukwafanelekile ukufaka iiradad kwiimephu ozisebenzisayo, ezokukunceda, ngaphezulu kwako konke, ukuze amapolisa angakohlwayi, into esoloko ifika iluncedo ngakumbi nangakumbi ngoku, ukuba kukho ingxaki enkulu apho Akukho mntu Kulungile ukuchitha ngaphezulu kwemali eyimfuneko.
Nokuba yeyiphi na, "Isilumkiso, mhlobo mqhubi, indlela iyingozi." Ngaba icacile kuwe ukuba kanjani hlaziya iTomTom yakho simahla?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » IGPS » IiMephu zasimahla zeTomTom
Izimvo ezi-163, shiya ezakho
UOsvaldo Juan Maccio sitsho
Ndingathanda ukwazi ukuba yeyiphi iGPS enemephu yeRiphabhlikhi yaseArgentina kunye nezona zixeko zibalulekileyo
Phendula u-Osvaldo Juan Maccio
Kwimibuzo malunga netomtom, kunye nezinye iibrawuza, ndincoma iqonga lejaviermb: http://foro.javiermb.com
kwaye iimephu azisimahla, ziingqokelela zeengcali.
Abahlobo balumkele uhlaziyo lwe-navman kwi-dvd 2008
bayakuthengisa kwi-CRAMBO kuba abaxeli ukuba ukukhangela amanqaku anomdla kuyanyamalala, kwaye nokuba ungabanga malini na, bacoca izandla kwaye eyona nto bayenzayo kukuthumela…. (hayi hayi hayi) bakuthumela eLONDON navman ukusombulula ingxaki.
KODWA AKUKHO SOLO KUPHELA OBANIKA IMALI KANYE UGCINE IDVD ukuze woyikise amahobe.
Ndiyathemba ukuba ulumkile
Ndivula i-tomtom kwaye ayindixeleli ukuba akukho mephu, ikhuphela njani nayiphi na imephu ukuze isebenze
Ndingayifumana njani imephu venezuela yesixhobo sam se-TOM TOM mobile gps ???
Molo, ndingathanda ukuba undixelele ukuba ungayifumana njani imephu ye-tomtom one v2, eSpain nasePortugal, emva koko ndiyicimile kwaye andenzanga ikopi yogcino, ndiyabulela undincede
yintoni uguqulelo lwamva nje lweTOM TOM
UTSHINTSHO LWAMVA KWIMAPU ZOMAMA
Ndikhangela njani iimephu zaseMexico zegps invion 3v4 ungandixelela ukuba ndizifumana phi
molo, ungaba nobubele ukundixelela ukuba ndihlaziya njani i-tomtom enye, enkosi.
ilunge kakhulu kubo bonke, ndiyabhengeza; Ndine Tom tom 720 hamba,
ngohlobo lweemephu v705 kwaye ndingathanda ukubeka ingxelo v8. Ngubani obanezixhobo zokujonga izinto zeradar kunye namanye amaqhinga, ngaba umntu angandixelela ukuba ungayifumana phi, enkosi nonke kwangaphambili.
Imibuliso, ndiyifumana phi kwaye ndiyifumana njani imephu yaseVenezuela ngetomu lam
Molo ndine-tom3 ye-EdXNUMX kwaye andinazo iimephu zaseVenezuela, ngubani onokundinceda… ..?
oscar santana sitsho
molo ndihlala eVenezuela kwaye ndifuna ukufumana imephu yeli lizwe ukuze ndiyenzele itomom kwaye andazi ukuba ndiyikhuphele njani, enkosi.
Phendula u-oscar santana
nabani na uyazi ukuba angayihlaziya njani imephu enye yemephu
UGustavo de Lemos sitsho
Ndingathanda ukwazi ukuba kukho iimephu ze-venezuela ze-GPS tom tom enye.
Phendula kwi-gustavo de lemos
Iphepha eliqhagamshelwe kwikhonkco elingaphezulu libonisa kuphela ukhetho lwe-tomtom 5 kunye ne-6, apho ndifumana khona u-tomtom uguqulelo olunye 3
Ndikhangela enye evela eMexico ukuba nabani na uyazi ukuba ndingayivuyela impendulo yakho
NGOMSO WOKUQALA sitsho
Nangona sele bebuzile, andiboni mntu uphendulileyo. Ngaba umntu othile angayiqonda indlela yokuhlaziya okanye yokukhuphela iimephu zaseSpain-Andorra-Portugal, zeTomTom ONE. Enkosi kakhulu kwangaphambili
Phendula TOMTOM ONE
ULuis Alfredo sitsho
Umhlobo ndithenge i-tomtom 125 kwaye andiyifumani imephu yaseVenezuela, ukuba ungandinceda ndiyenze njani okanye ndiyifumana phi, enkosi
Phendula uLuis alfredo
molo ndinetom tom kiero enye ndiyayihlaziya ke vien ace iminyaka esi-7 andinalwazi lokuba iyi-ace kiero spain portugal ne-andora
Ndiyabulisa ndibone wonke umntu ebuza ukuba ngubani obuzayo kwaye akukho mntu waziyo nto? Ndidinga imephu yaseVenezuela nceda ukuba uyazi malunga nechibi undazise i-gps yam ngu-tom tom 3rd edition i-gps ilunge kakhulu kodwa i-gringos iya kuba kuba ndinayo entsha ebhokisini yayo kuba khange indikhonze kodwa konke konke. ncedaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ndijonge imephu yespain ukusuka ngo-Tomtom 74500, umntu uyazi ukuba angayifumana phi
ndingazifumana njani iimephu ze venezuela zam zangxamisekileyo
Ngaba ungandinceda, ndifuna imephu yaseSpain ngetomtom go 300 navigator, enkosi 24/02/2009
ukuthengiswa kweernesto sitsho
Ndihlala eVenezuela kwaye andazi ukuba ndiyikhuphele njani imephu, enkosi kwi-gps tomtom yam
Phendula kwiintengiso ze-ernesto
uElazare jaime sitsho
Ndihlala e-usa, kodwa ndiya eMexico kwaye ndifuna ukwazi indlela yokukhuphela imephu ye-gps tom tom 730, ukuba umntu uyayazi indlela yokwenza, ndingathanda ukuba bandazise
Phendula u-eleazar jaime
Molweni nonke, ngaba wonke umntu uyazi ukuba ndingabeka njani ukhetho
I-ADVANCED LANE ISIKHOKELO, kwimephu ye-tomt 720
Enkosi kwaye Malunga
ye-TOMTOM ONE, uyikhuphele kwi-emule okanye kwindlovu, iya kucacisa ukuba ungayifaka njani, ithamsanqa
Ukukhuphela imephu yespain indibuza igama eligqithisiweyo kwifayile echazayo spain / cline.dat ithini iphasiwedi?
URubén Nachar sitsho
Inkqubo ye-gps ye-blackberry
Phendula kwi-ruben nachar
Ngaba ukhona umntu owaziyo iikhowudi ze-iberia kunye
Ukuba uyamazi umntu ukuba ikhowudi angayithumela kum nceda 664111639
Molo NDINOMNTOM TOM OMNYE XL KUNYE NDIFUNA UKWAZI UKUFUMANA IMPU YASEVENEZUELA NGEZI Zixhobo. NDIYABULELA KWANGOKO.!!!!
Ndihlala eSpain kwaye andizikhupheli imephu yaseYurophu kwi-gps (tomtom) yam, ngaba umntu othile angandixelela?
Ndisandula ukuthenga i-2 tom toms e-usa, imodeli enye ye-xl
Ndifuna ukuyisebenzisa eArgentina, ungakwazi okanye ndiyaphulukana nayo kwi c… .., enkosi
Mholweni !!! Ndingasifumana njani isoftware yasimahla kunye nemephu yePeninsula yaseIberia yohlobo olunye lwe-omtom?
nantsi into ebuzwayo kodwa akukho mntu usombulula nantoni na! Yeyiphi iforamu ebalulekileyo
UMarcos Catillo sitsho
Kulungile kwenzeka ntoni ukuba bangaphenduli i-chorrera yemibuzo malunga neemephu ze-venezuela zangomso nceda ungasenzi ukuba sichithe ezokwenene kunye nexesha
Phendula kwimarcos catillo
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba nabani na uyazi ukuba angazifumana njani iimephu zasimahla zaseSpain ngehtm yegolide yedayimane. enkosi imibuliso
Ndingazihlaziya njani iimephu zeTomom ENYE yeNtshona Yurophu
Molo Flores, unayo ingxaki esonjululwe? ukuba akunjalo, nxibelelana nam, malunga
ndingazifumana phi iimephu zaseMexico
imeyile yam yile ingcongconi_rata@hotmail.com
Ndingazihlaziya njani iinguqulelo zamva nje zeemephu zangomso weXL.
Imephu zaseTomom Venezuela sitsho
Molo kusasa ekuseni, ndizifumana phi iimephu zaseVenezuela zetumum yam yohlobo olunye lwe-3
Phendula kwiimephu zeTomt Venezuela
molo ngokuhlwa okuhle bendifuna ukwazi ikhonkco elithile lokukhuphela imephu yaseyurophu ye-tomtom enye
uhlala eyi-asshole, yonke into engena kumaphepha e-pornos, AKUKHO CASE AGAN AYIZOYO IINKCUKACHA ZOKWENZA
Rhoqo i-asshole, yonke into yokungenisa amaphepha e-pornos, AKUKHO AGAN CASE AYIZO IIPHEPHA ZOKWENENE, ZIINKONZO ZOBUXOKI
i-asshole, yonke into yokungena kumaphepha e-pornos, AKUKHO AGAN CASE AYIZOYO IIPU ZOKWENZA, ZIINKONZO ZOBUXOKI
Molo, ndine-TomTom One XL, nceda, inkqubo yokwabelana ngemephu icinyiwe kwaye ndingathanda ukuba umntu andithumelele le nkqubo nge-imeyile.
UJavier shrew sitsho
Kwabo bacela iimephu zaseVenezuela ngomso ndiya kukuxelela into ibenye. Banayo ngokulula kakhulu, ngokubuza umhlobo wabo uChavez kwaye umba walungiswa.
Phendula kuJavier Shrew
UDavid benitez sitsho
Molo, ndisandula ukuthenga i-TOM TOM ONE GPS kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ndingazikhuphela phi iimephu zaseMexico kuba zibiza ixabiso elithile xa zithengiswa
Phendula kuDavid Benitez
ndingazifumana phi iimephu zepoloni i ukrania ?????????????????????
kwaye cd sinazo iimephu zaseArgentina
Molo ndingathanda ukwazi ukuba ndiyifumana phi imephu ehlaziyiweyo ye-tomtom gps enemeko yeeradars zamapolisa ezendlela eSpain kwaye ke angadluli ... Ndiyabulela
UGustavo A. sitsho
Nceda, ndiyifumane njani imephu ye-venezuela ye-TOMTOM One gps yam ???
Phendula kuGustavo A.
Ndingazifumana phi iimephu ezihlaziyiweyo zaseYurophu zeSONY NV-U93T.
Ewe, isony ayitsho ukuba ayitsho.
Inyani yile yokuba i-gps tom tom yi-bullshit, akukho ndlela yokulayisha imephu yaseArgentina kule poronga kwaye ngaphezulu kweeforamu ziya kujongeka njengezona zilungileyo, wonke umntu ahambe nesithukuthezi nalowo undiphathele i-gps nayo
apho ndingayihlaziya khona i-tomtom enye xl yasimahla kwi-Intanethi.
emzantsi Melika kukho iimephu ze-tomtom zeBrazil kunye neArgentina
emantla emelika eMexico izinzile imanyene kwaye icanada
eAfrika emzantsi afrika
MHOLO. NDINGATHANDA UKWAZI UKUBA IKHONA KANYE NENDLELA YOKUKHUPHELA I-BRAZIL ROAD MAP FOR TOMTOM
jose luis sitsho
Molo, ndinayo i-qtek s200 ephathekayo kwaye ndinayo ne-tomtom kodwa ndingathanda ukukwazi ukuyivuselela SIMAHLA, umntu uyazi ukuba ndingayenza njani.Ndiyabulela kwaye ukuba uyandinceda ndiya kubulela ngentliziyo yam yonke, umbuliso nomhlobo
Phendula ku jose luis
UMNTU UYAZI APHO NDINOKUFUMANA KHONA MAXICO MAPS MAHALA KWI-TOMTOM YAMI 125 SE
KWANGAPHAMBILI NDIYABULELA UNCEDO, ENKOSI!
MASIBONE… EFANAYO BONKE ABANYE ...
Molo, ngokungxamisekileyo ndifuna ukukhuphela imephu yeVenezuela kwi-gps tomtom yam, nceda ulinde impendulo ngokukhawuleza, enkosi.
Ndiyathanda ukwaziswa nokubona inkangeleko yawo onke amazwe
kuba nabani na ofuna ukuba ndinayo ikopi yentsusa ye-tomtom esebenzayo kunye ne-xl nabani na oyifunayo ukuba aqhagamshelane nam ndivela kwi-barcelona gasper210688@hotmail.com
ndicela undithumele ngokukhawuleza
molweni nonke, ndingathanda ukwazi ukuba yeyiphi na inguqulelo yeTomTom enokundilungela kwi-BlackBerry curve 8520 ye-smartphone kwaye ukuba ayikho, nayiphi na inguqulelo yeGarmi, iSgic okanye enye….
Molo, busuku obuhle, namhlanje ndithenge kwisitokhwe se-GPS TOMTOM XL 30 ethi xa ndiyivula indixelele ukuba akukho zimephu kwiscreen, ndibize inkonzo yobuchwephesha kwaye bandixelele ukuba kufuneka ndithenge imephu entsha I-iberia v8.40 exabisa i-paste, kukho indlela yokuyifumana simahla okanye ikhona enye indlela yokulungisa.
Phendula u Guillermo
Ndingazifumana phi iimephu zaseYurophu ze-SONY 93T, ngaba kuya kubakho ukubanakho ukubeka ezo ze-TOM TOM? Ngaba ukhona umntu osele efake i-TOM TOM kwi-SONY 93T?
Imibuliso kubo bonke.
Umncedisi wemedina sitsho
Umhlobo ndingathanda ukwazi ukuba ndenza njani ukufaka imephu yePanama kwi-gps yam-tom! enkosi!!
Molo, ndithenge i-tomtom go 730 kwinyanga ephelileyo kwaye ayindixeleli malunga nesiqingatha seeradar, ndicinga ukuba xa uthenga into entsha, zombini iimephu kunye neeradars kufuneka zihlaziyiwe. Ndingayikhuphela njani okanye ndiyivuselele yonke le nto, enkosi kakhulu.
Molo, ngaba umntu angatsho apho anokufumana khona iimephu zaseSpain nasePortugal ze-tomtom enye v8 kuba ezo ndizibeke e-iberia zindinika impazamo, ithi isixhobo asichanekanga kwaye kwimeko yam kuye kwafuneka ndifomathile i-GPS kuba yanika impazamo enkosi kakhulu.
kusasa ekuseni nceda ufuna imephu ye-venezuela yetom tom one
Ndifana nabanye abaninzi ekukhangeleni iimephu ze-venezuela ze-tomtom gps ...
Kukho isoftware ebonakala ngathi iyakwazi ukusombulula ingxaki ngokuguqula iimephu zeGarmin kwifomathi esetyenziswa yiTomtom gps, ibizwa ngokuba yi-gpsbabel ... kodwa andikhange ndingene kuyo ...
Ukuba umntu uphumelele ... Yabelana ngolwazi ..
Molo, umntu angandixelela ukuba ndingayilanda phi imephu yase-Itali naseSpain, yasimahla kwiTomTom.
Ndingayilanda njani i-cartography yaseSpain nePortugal ngeeradars ngaphandle kokuhlawula ipenny.
kakuhle i-GPS yitoni ye-v4
UJose Granados Parejo sitsho
NdinePda Airis kwaye ndinqwenela ukuba ndiyazi ukuba ndiyilayisha njani i-tom tom
Phendula kuJose Granados Parejo
KANYE NOJUAN sitsho
U-ABEL NO-LEIDY BAKUTHANDA, BATHANDWA KUZE KUKHO INXALENYE KUNYE NE-AYAI
Phendula KODWA NOYOHANE
Molo, ndingazifumana phi iimephu zeedolophu ezinjengeOtamendi, iMiramar, njl.
ULouis macher sitsho
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba ndingakhuphela phi okanye ndithenge imephu yeemaphu yeTomTom GPS….
Phendula uLuis Macher
Molo, ndinoluhlu lwe-tomtom v4 30/125/130 kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ukhona umntu ohlaziye iimephu okanye owaziyo ukuba ndingazikhuphelela simahla, ndingayivuyela le imeyile yam javier.pm74@hotmail.com.
Enkosi uPablo, bayisombulule ingxaki yeemephu zaseArgentina bendimise njengeminyaka emi-2 igps yam kwaye ekugqibeleni abantu http://www.mapeo-gps.com.ar i-salu2
Ndine tomtom enye kwaye andazi ukuba ndingajonga njani iimephu ezintsha zaseSpain kwitomtom yam ukuba umntu uyayazi, kwaye bangena kwi-msn yam, enkosi.
Noelia blanco utshatile sitsho
Molo ndinokuqala ngqa kwaye ndingathanda ukufumana imephu yendlela ye-italy. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ndingayifumana phi ?? Enkosi.
Phendula noelia blanco otshatileyo
URafael Melendez waseGuaynabo Puerto Rico sitsho
Ndithenge iMAGALLAN GPS kwaye kufuneka ndiyivuselele kwaye andiyifumani
Uyenza njani ,,, xa bendinika simahla ndizama ukuyikhuphela emva koko
Ndiyahlawulwa kwaye ndiyazibuza ukuba lithetha ukuthini igama elithi simahla, umntu angandicacisela ANDIYIQONDA
Phendula kuRafael Melendez waseGuaynabo ePuerto Rico
UVictor MENDEZ sitsho
Ndine-Tomtom ukuya ku-730, ndingathanda imephu yaseMexico ukubona ukuba ungandinika na
Phendula UVICTOR MENDEZ
Into endiyifunayo yiNavCore 9.001 endixelelwe ukuba ingafakwa kwi-GO 720 ...
Kwiphepha elisemthethweni leTomTom izinto ezihambelana ngoku zidweliswe njenge-8.351
NDIFUNA IPHEPHA LOKUHLAZIYA SIMAHLA
Iinyibiba endizaziyo zezona zibuzayo kwaye enye endinayo kwikheyiji yokubeka iimephu, kuya kufuneka uyithenge njengakuhlala kungekho nto IMAHLA
Sawubona wonke umntu,
Ndine-GPS yeXROAD, umntu angandixelela ukuba ndiyikhuphele phi imephu ye-MEXICO, ndingayivuyela kakhulu, ukubulisa kubo bonke
Ingelosi u-azamar ramirez sitsho
Mva kwemini, ndifuna i-GPS yembaleki. Ungandixelela ukuba ndingayikhuphela phi?
Phendula ingelosi u-azamar ramirez
UEdwin egure sitsho
Ndingayifaka njani inkqubo yam yetom enye kwisixeko saseMexico ukuya kwisixeko saseUnited States? Sele ndinemephu zala mazwe mabini? enkosi.
Phendula uEdwin Egure
Molo, ndinetom tom 510, ndingathanda ukuyivuselela, kuba andikaze ndiyivuselele, ndingayenza njani? Unayo uhlaziyo? Ungandixelela amanyathelo oza kuwalandela?
Ndilindele impendulo yakho.
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukukhuphela imephu yasimahla yaseMexico ukuze iTomtome iye kuma-720 ??? imeyile yam yile jalvareal@hotmail.com enkosi !!!
Ngaba umntu unokundinceda ngemephu yaseMexico kwi-GPS X Road
Ndiyifumana njani imephu yaseVenezuela ukuyifaka kwiTom Tom XL 335 SE yam?
Molo ndine-tom tom enye i-iberia entsha kwaye ndifuna zonke iimephu kuba imemori khadi yam yaphuka yaza ayabinanto. Ndingaluvuyela uncedo lwakho
Zihlobo, ninjani, nceda ndincede. Ndine-tomtom one gps kwaye andifumani ndlela yokukhuphela imephu yaseVenezuela kuba ndihlala apha… ndicela undincede
Ngaba umntu othile angandinika isandla, ndinomntu ongu-tom tom 720 ebendikhangela i-intanethi kangangeentsuku zokukhuphela iimephu, khange ndikwazi ukuzifumana, nceda ukuba ukhona umntu owazi okuncinci malunga nesi sihloko, sincede,
Enkosi kakhulu kunye nemibuliso
Ndingazifumana phi iimephu zeSony 93T.
Ewe, andizifumani naphi na.
Ndine-airis 509 PDA kwaye ndineTomTom 6 kwaye bendifuna imephu ehlaziyiweyo ye-Iberia
Molo, ndine-Aviton GPS kwaye ndifuna ukubona ukuba ndingayilanda phi imephu yaseMexico kwaye yeyiphi eyona ilungileyo
uwilfredo martinez sitsho
Molo, jonga apho ndinokuzikhuphelela khona ezona mephu zeVenezuela ze-Tomtom yam xl
Phendula ku-wilfredo martinez
Molo ENGO UN TOMTOM ONE XL Yurophu.
Kwaye ndifuna ukuyihlaziya kodwa kwiwebhusayithi esemthethweni kuyabiza kakhulu ukuba umntu uyazi indlela yokuhlaziya iimephu zale gps nceda sele ndinayo
UMARGARITA DE LA TORRE sitsho
Molweni zihlobo, ndibuze ukuba ukhona umhambisi weTOMTOM eGuadalajara, ndiyifumene e-usa kwaye iyasilela
Phendula UMARGARITA DE LA TORRE
imargarita de la torre sitsho
Ndinengxaki ngemodeli yam yetomtom XXL 550-T, ndiyizise ivela e-usa kwaye ngesiquphe iscreen sajika sabomvu kwaza kwavela ilivo lokuba ndinengxaki ngemephu kwaye ukusuka apho andinako ukuyikhupha, umntu angaxela kwenzeka ntoni kuyo kwaye ukuba unoluvo lokuba ungayilungisa kanjani enkosi.
Ndibulisa kubo bonke, ndine-Tomtom Wireless MkII gps, oko kukuthi, idibanisa ngeBluetoth ngePalm Treo 650, ingxaki kukuba ndifuna iimephu zeRiphabhlikhi yaseDominican ukuze ndizikhuphele. jonga ukuba kukho umntu ondincedayo ukuba ndifumane indawo apho ndingabafumana khona
UFrancisco Pherez sitsho
NDITHENGA I-TOMTOM GO 730 GPS yeVENEZUELA kwaye andikhange ndibenakho ukuyisebenzisa ngenxa yokuba andinayo imikhondo yeVENZUELA UNGANDINCEDA ENKOSI
Phendula uFRANCISCO PEREZ
UJuan perez sitsho
Ndiyabulisa ndine Tomtom enye kwaye andazi ukuba ndingayihlaziya kanjani.Ndithe ikhona inkqubo
simahla kodwa ayindivumeli ndingene ngaphakathi. Ndingaluvuyela uncedo lwakho, enkosi
Phendula ku-juan perez
Kwiminyaka embalwa ndithenge i-tomtom enye xl europe kwaye ukusukela ngoko khange ndiyiyihlaziye, ndingazifumana njani iimephu ezikhoyo zale gps?
Ndihlala eMadrid kwaye njengoko ndikuxelela, ndiza kufuna ukuhlaziywa kwale modeli.
Ndifuna nokukubuza, ngaba ikhona into enokwenzeka ukuba xa uhlaziya iimephu zegps ziya kundilayisha?
Ndiyathemba ukuba uncedo lwakho
Baye bandizisela ukonwaba kwangoku kwaye andifumananga ndlela yokukhuphela imephu yaseVenezuela, ndifunde inqaku esele likho kodwa alibonisi kwiwebhusayithi esemthethweni okwangoku
ISANTOS SANCHEZ sitsho
Molo KAKHULU NJENGABO BONKE NDIHLALA ENSENADA BC MEXICO KUNYE NDIFUNA UKUBA NDINCEDE NDIKHUPHELELE I-R MAPS YASEMEXICO., NJENGOBA NDINENJOMO YOMBUTHO WESI-3 KWAYE NDINGENAKUFUMANA INDLELA
Phendula kwi-SANTOS SANCHEZ
cesar anibal umzukulwana uG. sitsho
Ndine-tomtom xl kwaye andazi ukuba ndingenza njani ukuze ndihlaziye iimephu zelizwe lam «i-Ecuador», konke ngenxa yokuba isixhobo ngokwaso asisiqondi, ndifuna ukuba inkqubo ye-tomtom icace ngakumbi ukuze ikwazi ukuhlaziya kwiwebhu.
Ndiya kuluxabisa kakhulu uncedo
Phendula u-cesar anibal nieto G.
Nceda ungandinceda njengoko ndinokufumana iimephu zaseMorocco okanye zeAfrika… .. Enkosi kakhulu….
Molo, ndithenge itomtom nge-1505 t e-usa kwaye ndifuna ukukhuphela iimephu zaseArgentina simahla, ndingayenza njani ???
imephu echanekileyo ye-argentina ye-gps tomtom 310, ukusuka ja enkosi
Kulungile kakhulu ndingathanda ukwazi ukuba umntu angandinceda phi ukufumana iimephu ze-Ecuador ze-TOMTOM ONE GPS yam… enkosi
juan carlos sitsho
Andazi ukuba kutheni le Tomtom GPS ikhutshwa ukuba kunzima kakhulu ukufumana imephu esikelelweyo !! Ndidinga imephu ye-Ecuador rrrrrr ukuba nabani na uyazi ukuba ndingabaxabisa njani
Phendula ujuan carlos
Sawubona wonke umntu
Ndine-tomtom ukuya ku-730 Ndifuna ukuhlaziya iimephu zasimahla ukuba ukhona umntu owaziyo ukuba ndingazifumana phi ndingavuya ukuba ungandixelela
Molweni… Nabani na ondincedayo ndiza kuba nayo i-tomtom ku-710 ngemephu yase-Europe, ndiyilayisha njani imephu yase-United States… enkosi kakhulu
uAndres alcala sitsho
Ndilele ebusuku ndine-gps tom tom340 xl njengangaphambili ukukhuphela iimephu ze-venezuela ndifuna uncedo ngale mbulelo
Phendula u-andres alcala
Ndithenge i-TomTom XXL, kodwa andizifumani iimephu zaseVenezuela zokuzilayisha, ukuba umntu angandinceda, ubuncinci kwizixeko eziphambili ndingayixabisa. Enkosi kakhulu.
Kulungile! Ngaba ukhona umntu onokundinceda? ngenxa yeengxaki endizifumene ngaphandle kweemephu eTomtom ONE, ngaba umntu othile angandinceda ukuba ndifumane eyangoku kunye ne-validator? ehlekisayo
Nditshintshe yonke into ukusuka kwi-Sony 93T ukuya kwi-Igo 8 kwaye isuka ku-p ... mama, zilunge kakhulu kwaye zihlaziyiwe iimephu, ii-radars kunye ne-poi.
UJavier Lopez Iglesias sitsho
Ndingathanda ukukhuphela imephu ehlaziyiweyo yetom tom xxl emzantsi afrika, unganceda? Ndiyabulela kwangoko
Phendula ku-javier lopez iglesias
Lo msonto mdala kakhulu, kufuneka ucinywe njengoko indawo ekucatshulwe kuyo ivaliwe iminyaka eliqela.
Abo banomdla banokukhetha i-gps-iingcali. okanye
Ndiyathemba ukuba iyakusebenzela
UGuillermo Acuña Garrido sitsho
Ndidinga ukuvuselela imephu ye-7-jpc yokukhangela kwam ukuba kukho into efanayo
Phendula guillermo acuña garrido
Ndidinga iimephu zangoku spain tomtom tomtom one 3 edition
Molo, jonga ukuba ukhona umntu onokundinceda. NdinePocket PC kwaye umthengisi undifakele i-Tomtom malunga neminyaka esi-7 eyadlulayo, kunye neemephu zeIberia kunye neCanary Islands. Ngoku ndiya eBrazil kwaye ndifuna ukubeka iimephu zelizwe kodwa andifumani sicelo sasimahla. Nceda undixelele ukuba ndingayifumana phi?
URamiro. NdiseColombia, kufuneka nditshintshe ntoni kwiimephu zaseMedellin?
U-rodolfo leon diaz sitsho
Molo, ndingumChile kwaye ndifuna imephu yelizwe lam.Ndinomntu ongu-Tom Tom (30 Series) / 125/130 - 1GB TTS * nceda undixelele ukuba kukho imephu yaseChile okanye akunjalo, enkosi
Phendula u-rodolfo leon diaz
Molo ungandinceda Ndithenge i-TOMTOM kwaye ndingathanda ukwazi ukuba unayo imephu yaseVenezuela
URogelio Quezada Sepúlveda sitsho
Mholo. Ndine-TOMTOM VIA 1500M SE, kwaye ndingathanda ukuyilungiselela ukuba indisebenzele kwiRiphabhlikhi yaseDominican, kuba ayifakwanga kuluhlu lwamazwe elinalo. Ndingaluvuyela kakhulu naluphi na uncedo kule meko.
Phendula Rogelio Quezada Sepúlveda
Ndinegps dash mw 710 gtv, uyazi ukuba yeyiphi inkqubo yokuyihlaziya? Bandixelele ukuba inokuba nguTom Tom kodwa andifuni kumosha
enkosi nceda nceda
Molo, ndinayo i-tontom put kwaye andikwazi ukuyamkela i-UK kunye ne-Holland postcodes, ukuba umntu uyazi ukuba kufuneka ndenzeni nceda undincede, ENKOSI.
Hahaha, hahaha, hahaha, haha ​​ndaphela yintsini !!!!! Uthenga i-GPS kwaye awazi ukuba unemephu zelizwe lakho.
HLEKA KAKHULU. Ngendlela, ukuvuyisana nalowo ukuthengisileyo. hleka kakhulu
Miguel, sidengendini. Uthenga iGPS phesheya kwaye igcina ubomi bakho apho. Emva koko ubuyela kwilizwe lakho kwaye ufumanisa ukuba awunakufaka ezinye iimephu ngaphandle kokukuhlawulisa imali eninzi. Yiloo nto abantu bafumanisa. Usisidenge kwaye awonwabanga kangangokuba uyanya.
isebe eliphambeneyo sitsho
Ndisuka eMedellin Colombia ndifuna ukuhlaziya imephu
Phendula kwisebe eliphambeneyo
IWILMAR VANEGAS M sitsho
Mholweni ukubulisa ...niyiphumelele imephu
Phendula kwi-WILMAR VANEGAS M
Ndidinga ukubona iimephu zase-usa kwaye ilizwe alibonisi kukhetho
EVenezuela kukho iindlela ??????????????
Ngubani onokundinceda ndihlaziye iimephu ze-Tomtom eziza kwi-Renault Rlink. Uhlobo lweemephu 925275 lulayishiwe. Ndiyakubulela kwangaphambili.
Ndenza njani esihogweni ukuba icwecwe elibusisiweyo leTOMTOM livele kwiPC yam ?????????????????????
OKO NDIKUFUNAYO UKUBA KUNOKWENZEKA UKUKHOKHELA KWINKQUBO YOKUHLAZIYA I-TOMTOM XL GPS ENKOSI
Omar david sitsho
molo ndinetomtom star25 kodwa neemephu zase-usa wena kunye nomnye ovela e-USA, Canada eMexico. kodwa ndifuna ukusuka eArgentina okanye eMzantsi
Phendula u-omar david
UJuan Miguel Cassissa sitsho
NdineTOMTOM XXL endiyithengileyo kwaye ndiyisebenzisa phesheya. Ngoku ndibuyele kuhlala eArgentina, andiyifumani indlela yokuba uTom Tom Home okanye iMyDrive Connect yamkele ukuba ndithenga iimephu zaseArgentina kunye nayiphi na enye indawo emhlabeni (ngaphandle kweemephu zelizwe endandihlala kulo. iminyaka), ukusukela ukuphela kwenkqubo yokuthenga nasemva kokufaka iinkcukacha zekhadi lam letyala, iwindow ihlala ibonakala isithi KUKHO INGXAKI ... njl. njl. Ndivule iakhawunti entsha kwi-TOM TOM Home evela eArgentina kwaye akukho anti wakho, awunakuthenga nto.
Ungandicebisa ukuba ndingazithenga njani iimephu kwiwebhusayithi yakho?
Phendula uJuan Miguel Cassissa
Ndine Tom tom enye yexesha elide, kwaye inyani kukuba ndilahlekile ikhadi elizise iimephu, yikhadi eliqhelekileyo le-sd, kwaye ndifuna ukubeka enye ngeemephu, ucinga ukuba ikhona indlela ukuzifaka ekuqaleni, kukuba ndihlala ndijonga ukuphucula kodwa hayi ukufakela kwasekuqaleni.
Ndiyathemba ukuba ungandinceda, enkosi.
Ndine-TomTom One enemephu yase-US kwaye ndifuna ukubeka imephu ye-Uruguay kuyo, ndenza njani?
Ana torres sitsho
Ndine-VIA 1400 tomtom. Khange ndikwazi ukuyisebenzisa. Ndivela eVenezuela. Ndiyazibuza ukuba ayihambelani neemephu zethu?
Phendula Ana torres
Molo ngolunye usuku umhlobo wam wandinika i-tomtom 3rd isizukulwane sama-512 mb wandinika ifomathiweyo kwi-fat32 kwaye akanayo into yokufaka inkqubo yakho ngaphambi kokuyihlonipha njengoko kusitsho u-tomtom kwaye ufake lonke uhlaziyo ndiyaluvula kwaye ndilungiselele kwaye yena undixelela ukuba azikho iimephu, ndenza ntoni?
Ndimtsha wokukhuphela njl.
Ndine Tomtom Go 720. Oko ndiyithengileyo, ndisebenzise iimephu ezize ngokungagqibekanga, ndithetha iminyaka emininzi.
Ewe iimephu andinazo iindlela ezininzi ezikhoyo, izitrato, njl.
Andikwazi ukufikelela kwimeko yam yangoku ukuthenga nayiphi na iphakheji yeemephu ezintsha kwaye andazi ukuba ndiqala njani ukukhuphela iphakheji evela eSpain simahla, kule modeli ye-tomtom kwaye uyifake.
Ngaba ukhona umntu onokundinceda?
UFlavio Perego sitsho
Ndingathanda ukuba undincede ngemephu ye-Ecuador. Ndiyidinga ngokungxamisekileyo
Phendula uFlavio Perego
ndingayikhuphela phi imephu ye-ecuador ..
molo ndifuna ukukhuphela imephu kwaye ayizukundivumela
ULuis Chamorro sitsho
Ndidinga ukukhuphela imephu yePanama. Kuya kuba kukuba oku akusebenzi. Ndine Tom Tom 600. Ndifuna uncedo olukhawulezileyo.
Phendula uLuis Chamorro
Molo manolo, awuyi kundivumela ndikhuphele iimephu nangona ndiye ndaba lilungu leforum, ngaba ikhona into elula?
Ndingayihlaziya njani imephu ye-Iberia kunye neekhamera ezikhawulezayo kwiXL? Ngomso indixelela ukuba ayihambelani xa ubeka inombolo ye-serial
UFrancisco Bolivar sitsho
Molo, ndinguFrancisco kwaye ndingathanda ukuhlaziya uTom Tom ONE Classic ngemephu ehlaziyiweyo yeSpain nePortugal, okwangoku ayinayo imephu ke ndizamile ukuyihlaziya noTom Tom kunye nemephu ebendinayo ndicime enkosi kakhulu.
Phendula uFrancisco Bolívar
Ndidinga ukuvuselela i-GPS ngenkqubo kaTom Tom, ikhadi le-SD lemoto yam yeFluence 2017 engafiki neemephu zaseBrazil, okanye eChile kwaye ndingathanda ukuyilayisha ekhadini, ndilinde ukuba kunokwenzeka bayandithumela indlela yokwenza
Molo ndine-tom tom yohlobo olunye lwe-2 kwaye ndingathanda ukuyihlaziya ngemephu ye-iberia 1020, ine-navcore 9510 kunye ne-bootloder 5.5136, ngaba kunokwenzeka? Unaso nasiphi na isifundo esihlaziyiweyo kwesi sihloko.
UGoogle usibonisa umgangatho oboniswe bubukrelekrele bayo bokufakelwa ekufotweni kwakhona kweefoto
Umhleli wevidiyo yasimahla